Ducooyinka Axdiga ee Barakada | QODOBADA SALAADA
Bogga ugu weyn Dhibcaha salaadda Ducooyinka Axdiga Ee Barakada leh
Maanta waxaan la macaamili doonnaa salaadda axdiga ee Barakada. Buugga MAAHMAAHYADII Cutub 10:22 Rabbiga barakadiisu hodan bay kaa dhigtaa, Oo isna caloolxumo kuma daro. Markay noqoto barako, waxaa jira ilo badan oo nin ka heli karo duco, laakiin barakooyinka Rabbi ayaa ugu fiican. Waxaa laga yaabaa inaad maqashay dad u tagaya meelaha macbudka si ay u dawarsadaan ilmo. Dadku waxay aadaan wabiga si ay u dawarsadaan carruur. Dadku meelo kala duwan bay aadaan si ay wax u dawarsadaan. Waxay illoobeen inaan Ibliisku waxba siinin si xor ah. Wax walba oo shaydaanka ka yimaada qiimo bay ku yimaadaan.
Si kastaba ha ahaatee, barakooyinka Eebbe ayaa hodan noqda oo murugo kuma daraan. Dhammaadka nin Rabbi barakeeyey waxaa ka buuxa farxad iyo raynrayn. Midna isku mid uma dhihi karo nin Ibliis barakeeyey. Dhibaatada haysata dad badan waa aragti gaaban. In badan oo naga mid ah ma arki karaan wax ka baxsan xaalka aan ku jirno, taasina waa tan shaydaanka siineysa gees. Jabez wuxuu garowsan yahay in Eebbe oo keliya uu barakeeyo oo sheekadiisa u rogo wanaag. Haddaba Yacbees wuu ka ciso badnaa walaalihiis, oo hooyadiis ayaa magaceedii u bixisay Yacbees, oo waxay tidhi, Maxaa yeelay, isaga waxaan ku dhalay xanuun. Bal i ducee, oo dhulkayga ballaadhi, inay gacantaadu ila jirto, oo aad sharka iga dhawrtid, si aanan u xanuunsan. Sidaas daraaddeed Ilaah wuu siiyey wixii uu weyddiistay.
Markaan u ducayno duco, waxaan u baahanahay inaan si dulqaad leh u sugno Ilaah inuu muujiyo barakada. Dhibaatada ina haysata ayaa ah in aan la sugi karin Sayidka sababtuna tahay aragtideena gaaban. Waxaan rabnaa in barakooyinku isla markiiba yimaadaan kadib markaan u ducaynno. Ducooyinka axdiga ee ducadu waxay ina siin doontaa inaan u ducayno muujinta barakada Ilaah. Wuxuu ballanqaaday inuu na barakeyn doono si aad iyo aad u badan. Markay ducadu timaaddo, waxaa jira waxyaalo inaga maqan. Iyo Filiboy 4:19 waxaad dhahdaa, Ilaahaygu wuxuu idinku siin doonaa wixii aad u baahan tihiin oo dhan sida ay tahay hodantinimadiisa xagga ammaanta Ciise Masiix. Kanu waa ballankii Ilaah inuu ku bixin doono baahideenna oo dhan sida ay tahay hodantinimadiisa xagga ammaanta Ciise Masiix. Taas macnaheedu waa maqnaansho dambe. Waxaan bilaabi doonaa inaan ku noolaano nolol hodan ah, hodan ah iyo caafimaad wanaagsan.
Rabbi Ciise, waxaan kuugu mahadnaqayaa maalin kale oo qurux badan, toddobaad kale oo qurux badan. Magacaagu ha ku sarreeyo magaca Ciise.
Sayidow, waxaan kaa baryayaa inaad iigu ducayso qalbi nabdoon wax kasta oo aad gacmahayga ku dhiibtay. Waxaan kaa codsanayaa in nimcadaadu i ilaaliso, waxaad wejigaaga u keeni doontaa dhoolla -caddayn oo waad ii roonaan doontaa maanta magaca Ciise.
Aabbow Sayidow, waayo, waa qoran tahay, rajooyinka kuwa xaqa ah lama gaabin doono. Waxaan kaa codsanayaa nimcadaada, waxaad i siin doontaa damacyada qalbigayga, oo waxaad ka dhigi doontaa qorshooyinkaaga noloshayda inay ku dhammaystaan ​​magaca Ciise. Waxaan ka baryayaa si dhakhso leh muujinta barakooyinkaaga noloshayda magaca Ciise.
Aabe Rabbi, waxaan kaa baryayaa inaad ii naxariisato. Waxaan kaa baryayaa inaad wejigaaga igu iftiimiso. Waxaa la qoray; Haddii nin jidkiisu Ilaah ka farxiyo, Wuxuu isaga ka farxin doonaa dadka hortiisa. Waxaan kaa baryayaa inaad raalli iga noqotid dadka hortiis. Markaan hore u socdo, ha la ii roonaado. Jidadkeyga oo dhan, waxaan ku baryayaa in raalli ahaanshahaaga iyo ducooyinkaagu aysan iga bixin magaca Ciise.
Aabbe Sayidow, waxaan kaa baryayaa inaad i oggolaato inaan la kulmo jacaylka saafiga ah ee Masiixa. Waxaan kaa baryayaa inaad iga buuxiso buuxnaanta nolosha farxad iyo raynrayn. Waxaan ku weydiisanayaa awoodda jannada; waxaad noloshayda ugu ducayn doontaa awoodda ka timaadda xagga Ilaah.
Aabbow Sayidow, waayo, waxaa qoran, Ilaah wuxuu i siin doonaa baahidayda oo dhan sida ay tahay hodantinimadiisa xagga ammaanta Ciise Masiix. Maanta laga bilaabo, wax wanaagsan igama waayi doono magaca Ciise. Waxaan ka baryayaa wax -ka -siin; Waxaan ku baryayaa samada furan noloshayda magaca Ciise.
Sayidow, waxaan baryayaa in Masiixu iga dhex helo hadal, oo gurigayga wuxuu ka dhigi doonaa hoygiisa. Waxaan kaa baryayaa inaad gurigayga ugu ducayso farxad iyo raynrayn. Waxaan kaa baryayaa inaad nagu ducayso qosol, degganaansho maskaxeed iyo jacayl aad u sarreeya. Waxaan kaa baryayaa inaad cadowgaaga u hor istaagto aawadeen oo aad nagu ducayso ilaalinta Ruuxa Quduuska ah.
Sayidow, Qorniinku wuxuu leeyahay Eebaha nabadda qudhiisu nabad ha ku siiyo mar walba iyo si walba. Waxaan ku bilaabayaa maalintayda ducooyinka aabaha. Waxaan ku dhaqaajiyaa maalintan barakada axdiga ee Ilaaha Qaadirka ah.
Sayidow, waxaan kaa baryayaa inaad noloshayda ku barakeyso midho -dhal. Aag kasta oo noloshayda ka mid ah oo carqaladeeya madhalaysnimada, waxaan kaa baryayaa inaad ku badiso magaca Ciise.
Aabbe, waxaan kaa baryayaa inaad igu ducayso hadiyadda Ruuxa Quduuska ah. Qorniinku wuxuu leeyahay haddii awoodda kii Masiixa ka soo sara kiciyey idinku dhex noolaato, waxay soo noolayn doontaa jidhkaaga dhimanaya. Waxaan weydiisanayaa barakada ruuxa quduuska ah. Waayo, waxaa qoran, Aakhirka, Ruuxayga ayaan ku shubi doonaa jidh kasta, Waxaan codsanayaa muujinta barakooyinkaan maanta magaca Ciise.
Sayidow, Qorniinku wuxuu leeyahay, Haddii nin xigmad u baahan yahay, ha ka baryo Ilaah si deeqsinimo ah u siiya isagoo aan iin lahayn. Aabbe, waxaan kaa baryayaa inaad iigu ducayso xigmad, aqoon iyo garasho xagga sare ah. Waxaan kaa codsanayaa inaad carruurtayda ugu ducayso ruuxa xigmadda. Aqoonta ka dhigi doonta inay ka sarreeyaan kuwa dhiggooda ah, waxaan kaa codsanayaa inaad iyaga ugu ducayso magaca Ciise.
article PreviousDucooyinka axdiga ee Naxariista
Next articleDucooyinka Axdiga Dambi Dhaafka
Qodobbada Salaadda Si Aad Ugu Socoto Jacaylka
Aayadaha Baybalka Baybalka